🥇 ▷ Trine 4 waxaa lagu muujiyey 7 daqiiqo PAX West ✅
Trine 4 waxaa lagu muujiyey 7 daqiiqo PAX West
Ciyaaraha Modus wuxuu joogaa PAX West oo sida muuqata haddii aad booqato mowqifkeeda munaasabadda waxaad isku dayi kartaa muujinta Trine 4, qeybinta afaraad ee layaabka dheer ee la yaab leh ee uu soo saaray Frozenbyte. Ciyaarta ciyaarta la soo bandhigay waxay ina tusaysaa inaan xoogaa is-dhexgal wada shaqeyn ah ku sameyno sheekada.
Tani waxay umuuqataa inay tahay Trine diiradda ugu saareysa taariikhda iyada oo la adeegsanayo shineemooyinka waqti ka waqti, wada hadalada udhaxeeya jilayaasha iyo sheeko xariir dheeri ah oo loogu mahadcelinayo cunsuriyada yar yar sida fariimaha NPCs iyo dhagarta raadadka masraxa. Taasi waxay tidhi, ciyaartu waxay wali diirada saareysaa shantooda, naqshad heer aad u kala duwan.
Ciyaarta ciyaarta waxaan ku arki karnaa inay tahay horusocod horleh oo ka badan wax kasta, waxaan u laabanaa inaan xakameyno saaxirkii Amadeus, Pontius the mindight or Zoya tuug ku jira jawi kufiican ciyaarta iskaashiga. Sida iska cad, waxa ugufiican ayaa ah in lala ciyaaro laba qof oo kale iyo in mid kastaa uu buuxiyo kaalintiisii ​​laakiin, sida caadiga ah sidaas ma ahan, waxaa jira ikhtiyaar u ah kuwa kaligood ciyaara ama ciyaartoy kale oo kaliya.
Waa ikhtiyaar aan hadda ku aragno qaab cayaareedkan maadaama kaliya labo ciyaartoy ay ciyaartu ciyaartaan xilligan. Halxiraalaha heerarka waxaa lagu xalliyaa iyadoo la adeegsanayo saddexda jilayaasha sidaa darteed ugu yaraan qaar ka mid ah cayaartoyda waa in si joogto ah loo beddelaa si sheekada loogu sii gudbiyo.
Zoya wuxuu adeegsadaa qaansada si uu u xaliyo halxidhaalaha u baahan dagaalka masaafada, halka saaxirku uu abuuri karo dhudhun firfircoon isla markaana mindiyaha ayaa u adeegsan kara gaashaanka inuu ka leexiyo waxyaabaha qaarkood sida iftiinka ama u leexinta dariiqa biyaha ee dhinaca kale ee masraxa. Waa inaan isku darno sedexda astaamood si aan u xallino “shaashad” kasta maadaama mid walbaa soo bandhigayo loolan.
Sheekadu waxay ku xirnaan doontaa amiir ay tahay inaan badbaadino, dabeecaddan dabeecadaha ah ee waxyaalaha ku dhammaan doona inay sii socdaan waxa silcaya. Ciyaartan waxaan ku arki doonnaa wax yar amiirkan wax yarna waan arki doonnaa. Trine 4: Amiirkii Habeenki.